Ilu 7 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Na-edebe iwu Chineke ka i wee dị ndụ (1-5)
A ratara nwa okorobịa na-amaghị ihe (6-27)
“Ka oké ehi nke na-aga n’ebe a ga-egbu ya” (22)
7 Nwa m, na-eme ihe m na-agwa gị,Jirikwa iwu ndị m na-enye gị kpọrọ ihe.+ 2 Debe iwu m na-enye gị ka i wee dị ndụ.+ Were ntụziaka* m ka ihe bara ezigbo uru ka mkpụrụ anya gị. 3 Kee ha ná mkpịsị aka gị. Dee ha n’obi gị.+ 4 Gwa amamihe, sị: “Ị bụ nwanne m nwaanyị,”Gwakwa nghọta, sị: “Ị bụ onye ikwu m,” 5 Ka o wee chebe gị ka ị ghara ịdaba n’aka nwaanyị na-ebi ndụ rụrụ arụ,*+N’aka nwaanyị na-akwa iko,* ka ọ ghara iji ire ụtọ ya rata gị.+ 6 M si na windo ụlọ m,Na mpio ụlọ m, ledata anya. 7 Ka m nọ na-ele ndị na-amaghị ihe,M hụrụ otu nwa okorobịa n’ime ha nke na-enweghị uche.+ 8 Ọ nọ na-aga n’okporo ụzọ dị nso n’ebe nwaanyị ahụ bi,Ọ gawakwara n’ụzọ gara n’ụlọ nwaanyị ahụ 9 Mgbe anyanwụ dara, ná mgbede,+Mgbe chi na-achọ iji, ọchịchịrị achọwakwa ịgba. 10 M wee hụ ka otu nwaanyị gara zute ya. O jiri ejiji ka akwụna,+ ọ dịkwa aghụghọ. 11 Ọ dị aghara, ọ naghịkwa ekwe ekwe.+ E nweghị mgbe ọ na-anọ n’ụlọ.* 12 Obere oge, ọ nọ n’èzí. Obere oge, ọ nọ n’ámá. Ọ na-aga chebiri ndị mmadụ n’isi ụzọ ọ bụla.+ 13 O jidere nwa okorobịa ahụ susuo ya ọnụ. Ebe ọ bụ na ihere anaghị eme ya, ọ gwara nwa okorobịa ahụ, sị: 14 “M chụọla àjà udo.+ Ọ bụ taa ka m mezuru nkwa m kwere. 15 Ọ bụ ya mere m ji pụta ka m zute gị,Ka m chọọ gị. M wee chọta gị. 16 M gbasaala ọmarịcha ákwà n’elu àkwà m,*Bụ́ ákwà linin tụrụ àgwà nke si Ijipt.+ 17 M feela mea, alo, na sinamọn n’elu àkwà m.*+ 18 Bịa ka anyị ṅụjuo ịhụnanya afọ ka mmiri ruo ụtụtụ. Ka anyị mee ibe anyị obi ụtọ ma gosi na anyị hụrụ ibe anyị n’anya, 19 N’ihi na di m anọghị n’ụlọ. Ọ gaala ebe dị anya. 20 O bu akpa ego gaa. Ọ bụ n’ụbọchị ọnwa ga-agbazu ka ọ ga-alọta.” 21 Ọ gwara ya okwu ruru ya n’obi wee duhie ya.+ O ji ire ụtọ rata ya. 22 Na mberede, o sooro nwaanyị ahụ ka oké ehi nke na-aga n’ebe a ga-egbu ya,Ka onye nzuzu a ga-atụ ịga ma taa ahụhụ.+ 23 Ọ nọ na-aga ruo mgbe akụ́ gbapuru imeju ya. Ọ dị ka nnụnụ nke ji ọsọ feba n’ọnyà. Ọ maghị na ihe a o mere ga-ata isi ya.+ 24 Ugbu a, ụmụ m, geenụ m ntị. Ṅaakwanụ ntị n’ihe m na-ekwu. 25 Ekwela ka obi gị duba gị n’ụzọ nwaanyị ahụ. Akpafula banye n’ụzọ ya.+ 26 N’ihi na ọ laala ọtụtụ ndị n’iyi,+Ndị o gburu dịkwa ọtụtụ.+ 27 Ụlọ ya na-eduga ndị mmadụ n’ili.* Ọ na-eduga n’ebe ndị nwụrụ anwụ tọgbọ.
^ Na Hibru, “nwaanyị bịara abịa.” Gụọ Ilu 2:16.
^ Na Hibru, “nwaanyị mba ọzọ.” Gụọ Ilu Ilu 2:16.
^ Na Hibru, “Ụkwụ ya anaghị anọ n’ụlọ.”
^ Ma ọ bụ “ihe ndina m.”